IDM 6.18 Build4နောက်ဆုံးထွက်ကလေးပါ ~ မိုးညိုသား
IDM 6.18 Build4နောက်ဆုံးထွက်ကလေးပါ
2:57 AM Downloader, IDM 1 comment
မင်္ဂလာပါ ဒါလေးကတော့ IDM 6.18 Build4ပါ .. သူကအမြဲတမ်း Update လုပ်နေတာဆိုတာ. နောက်ထပ်လည်း ထွက်လာအုံးမှာပါပဲ။ လက်ရှိ Update ဗားရှင်းကိုမှ လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို Patch ဖိုင်နဲ့အတူ တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်.
အောက်က လင့်တွေမှာ ဝင်ရောက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေကြပါစေ.
Download Link>>> ( Zippyshare : TusFiles )
chaand farish January 13, 2015 at 9:14 PM